Nhau - Popcorn chokwadi
1) Chii Chinoita Kuti Popcorn Pop? Imwe neimwe tsanga yemapopcorn ine donhwe remvura rakachengetwa mukati medenderedzwa re starch rakapfava. (Ndokusaka popcorn inoda kuve ne13.5 muzana kusvika ku14 muzana hunyoro.) Iyo starch yakapfava yakakomberedzwa nenzvimbo yakaoma yekunze yakaoma. Tsanga painodziya, mvura inotanga kuwedzera, uye kumanikidza kunowedzera pamusoro peiyo starch yakaoma. Pakupedzisira, iyi yakaoma nzvimbo inopa nzira, ichikonzera iyo popcorn "kuputika". Sezvo popcorn inoputika, iyo starch yakapfava mukati memapopcorn inozadzwa uye inoputika, ichichinja tsanga mukati kunze. Mhepo iri mukati meiyo kernel inosunungurwa, uye popcorn yabuda!
2) Mhando dzePopcorn Kernels: Iwo maviri akakosha marudzi epopcorn tsanga "butterfly" uye "howa". Iko butterfly kernel yakakura uye ine hunyoro ne "mapapiro" mazhinji anobuda kubva kune imwe kernel. Buttefly kernels ndiwo akajairika mhando yemapopcorn. Iyo howa kernel yakanyanya kuomarara uye yakaumbana uye yakaumbwa sebhora. Tsanga dzemushroom dzakakwanira pamatanho anoda kubatwa kwakakora kwemeso sekupfeka.
3) Kunzwisisa Kuwedzera: Iyo pop yekuwedzera bvunzo inoitwa neCretors Metric Weight Volumetric Bvunzo. Bvunzo iyi inozivikanwa seyakajairwa neindasitiri yepopcorn. MWVT chipimo checubic masentimita echibage chakabikwa pa1 gramu yechibage chisina kuvhurwa (cc / g). Kuverengwa kwe46 paMWVT kunoreva kuti 1 gramu yechibage chisina kuvhurwa inoshanduka kuita 46 cubic masentimita echibage chakabikwa. Iyo yakakwira iyo MWVT nhamba, iyo inowedzera huwandu hwechibage chakaputika pahuremu hwechibage chisina kuvhurwa.
4) Kunzwisisa Saizi yeKernel: Saizi yeKernel inoyerwa muK / 10g kana tsanga pagiramu gumi. Muchiyero ichi magiramu gumi emapopu anoyerwa uye tsanga dzinoverengwa. Iyo yakakwirira iyo tsanga kuverenga madiki iyo tsanga saizi. Kuwedzera kwepopcorn hakukanganisike zvakananga nehukuru hwekernel.
5) Nhoroondo yePopcorn:
Kunyange zvazvo popcorn ingangodaro yakatanga kuMexico, yaive ichirimwa muChina, Sumatra neIndia makore Columbus asati ashanyira America.
· Nhoroondo dzemuBhaibheri dze “chibage” dzakachengetwa mumapiramidhi eEgypt hadzinzwisiswi. "Chibage" chinobva mubhaibheri chingangodaro chaiva bhari. Iko kukanganisa kunobva mukushandurwa kwekushandurwa kweshoko rekuti "chibage," raiwanzo kureva tsanga dzinoshandiswa zvakanyanya dzeimwe nzvimbo. KuEngland, "chibage" yaive gorosi, uye muScotland neIreland izwi rinoreva oats. Sezvo chibage chaive "chibage" chinozivikanwa cheAmerica, chakatora zita iri - uye chinochengeta nanhasi.
[Pevhu] chibage chekaresa chinozivikanwa hachikwanisi kusiyaniswa nemukume wechibage wemazuvano, tichitarisa nesarasara yemakore makumi masere ezviuru yakawanikwa nemamita mazana maviri pazasi peMexico City.
Zvinotendwa kuti chibage chekutanga chakatanga kudyarwa uye chibage chakatanga.
Nzeve dzekare dzepopcorn dzakambowanikwa dzakawanikwa muBave Cave yekumadokero pakati peNew Mexico muna 1948 na1950. Kutangira kubva kudiki pane peni kusvika kumasendimita maviri, nzeve dzekare dzeBat Cave dzinenge makore mazana mashanu nemazana matanhatu.
Mumakuva ari kumahombekombe ekumabvazuva kwePeru, vaongorori vakawana tsanga dzemapopiki zvimwe makore chiuru. Idzi tsanga dzakachengetedzwa kwazvo zvekuti dzicharamba dzichibuda.
Kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweUtah, chiuru chemakore chiuru chemapopu chakawanikwa mubako rakaoma rinogarwa nevakatangira maIndia ePueblo.
· Urongwa hwekuviga hwevaZapotec hwakawanikwa kuMexico uye hwekufambidzana kubva kuma300 AD hunoratidza mwari wechibage ane zviratidzo zvinomiririra mapopiki echinyakare mumusoro wake.
· Mapepuru ekare mapopper - midziyo isina kudzika ine buri kumusoro, mubato mumwe chete dzimwe nguva wakashongedzwa nemifananidzo yakavezwa senge katsi, uye dzimwe nguva yakashongedzwa nemhando dzakadhindwa kwese kwese - yakawanikwa kumahombekombe ekuchamhembe kwePeru uye nezuva kudzokera kune pre-Incan Mohica Tsika yemakore mazana matatu AD
Mazhinji popcorn kubva pamakore mazana masere apfuura aive akaomarara uye akatetepa. Mbeu dzacho pachadzo dzaive dzakasimba. Kunyangwe nanhasi, mhepo dzimwe nguva dzinofuridza jecha regwenga kubva kumakuva ekare, kufumura tsanga dzechibage chakaputika chinotaridzika sechitsva uye chena asi chiine mazana emakore.
Panguva iyo maEuropean akatanga kugara mu "Nyika Itsva," popcorn uye mamwe marudzi echibage anga apararira kumarudzi ese eAmerica kuNorth nekuSouth America, kunze kwevaya vari munzvimbo dzekuchamhembe nekumaodzanyemba kwemakondinendi. Dzinopfuura mazana manomwe marudzi emapopcorn anga achikurimwa, akawanda anokatyamadza poppers akagadzirwa, uye popcorn yaipfekwa muvhudzi uye kutenderedza mutsipa. Paitove nedoro repopcorn raidyiwa zvakanyanya.
· Columbus paakatanga kusvika kuWest Indies, vagari vemo vakaedza kutengesa maputi kuvashandi vake.
Muna 1519, Cortes akatanga kuona popcorn paakapinda muMexico akasangana nemaAztec. Popcorn chaive chikafu chakakosha chevaAztec maIndia, avo vaishandisawo maputi semushonga wemhemberero dzemusoro, machira uye zvishongo pazvifananidzo zvavamwari vavo, kusanganisira Tlaloc, mwari wechibage, mvura uye kubereka.
· Rondedzero yekutanga yeSpain yemhemberero yekukudza vanamwari veAztec vaitarisa vabati vehove inoti: "Vakaparadzira pamberi pake chibage chakakangwa, chinonzi momochitl, rudzi rwechibage runoputika kana rwaoma ndokuzivisa zvirimo uye runozviita seruva jena ; vakati aya aive chimvuramabwe chakapihwa mwari wemvura. ”
Achinyora maIndia ePeruvia muna 1650, Spaniard Cobo anoti, “Vanogwinyisa rumwe rudzi rwechibage kusvikira rwuchiputika. Vanoidaidza kuti pisancalla, uye vanoishandisa sechinhu chinonaka. ”
Vaongorori vekuFrance vekutanga kuburikidza nenzvimbo yeGreat Lakes (munenge muna 1612) vakataura kuti maIroquois akapopora mbambaira mumudziyo wehari une jecha rinopisa uye vakaushandisa kugadzira muto wemapopcorn, pakati pezvimwe zvinhu.
Vakoroni veChirungu vakaunzwa mapopcorn pamutambo wekutanga wekutenda kuPlymouth, Massachusetts. Quadequina, munin'ina wemukuru weWampanoag Massasoit, akaunza bhegi reganda reganda rakaputika kumhemberero sechipo.
MaIndia ekuAmerica aiunza popcorn "tudyo" kumisangano nevamiriri veChirungu sechiratidzo chekufarira panguva yekutaurirana kwerunyararo.
· Vakadzi vepamba vaColonial vakapa maputi neshuga nekirimu pakudya kwemangwanani - yekutanga "kuzvitutumadza" zviyo zvemangwanani zvakadyiwa nevaEurope. Vamwe veva colonist vakapurura chibage vachishandisa humburumbira hwetete jira-simbi yaitenderera pane ekisero pamberi pechoto seyese ye squirrel.
Popcorn yaizivikanwa zvikuru kubva kuma1890s kusvika Kukuru Kwekuderera. Vatengesi vemumigwagwa vaiwanzotevera mapoka akatenderedza, vachimanikidza vaputi kana gasi-inofambisa simba kuburikidza nefairs, mapaki uye kufumurwa.
Munguva yekuora mwoyo, popcorn pamasendi mashanu kana gumi bhegi yaive imwe yeanoshamisira mhuri dzepasi-nepasi dzaigona kutenga. Nepo mamwe mabhizinesi akakundikana, bhizinesi repopcorn rakabudirira. Mumwe mubhangi weOklahoma akaenda akatyoka apo bhanga rake rakatadza kutenga muchina wepopcorn ndokutanga bhizinesi muchitoro chidiki padyo nenzvimbo yemitambo. Mushure memakore akati wandei, bhizinesi rake repopcorn akagadzira mari inokwana kutenga matatu emapurazi aakange arasa.
Panguva yeHondo Yenyika II, shuga yakatumirwa mhiri kwemakungwa kwemauto eU.S., izvo zvaireva kuti pakanga pasisina shuga yakawanda muAmerica yekugadzira zviwitsi. Kutenda nemamiriro ezvinhu asina kujairika aya, maAmerican vakadya popcorn katatu senguva dzose.
Popcorn yakapinda mukudonha panguva yekutanga ma1950, paterevhizheni payakakurumbira. Kupinda mumabhaisikopo emitambo kwakadonha uye, pamwe nayo, popcorn kudyiwa. Ruzhinji parwakatanga kudya maputi kumba, hukama hutsva pakati peterevhizheni nemapopu hwakatungamira mukumuka mukurumbira.
· Microwave popcorn - iko kwekutanga kushandiswa kweiyo microwave kudziisa muma1940 - yatove nemamiriyoni mazana mana emadhora mazana maviri nemakumi mana emadhora ekutengesa popcorn eUS muma1990.
MaAmerican nhasi vanodya 17.3 bhiriyoni mapaipi emapopcorn gore rega rega. Wepakati muAmerican anodya angangoita makumi matanhatu neshanu.
Caramel popcorn, China Yakagadzirirwa Classroom, popcorn, INDIAM popcorn,